April 2018 – Page2– media sport
[Zawgyi] အဆင့်အတန်းရှိရှိ အထာကျကျဖွန်ကြောင်နည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချဉ်းကပ်ပြီး စကားစမပြောခင်မှာကတည်းက သူမကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်နေဟန် ခန္ဓာဗေဒဘာသာစကားဆိုင်ရာ လှည့်ကွက်လေးတွေ သုံးတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စကားတစ်လုံးမှမပြောသေးပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အထာကျကျ ကျူနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ရှိတယ် ဆော်ရှိပြီး သားဆိုရင်တော့ စာဖတ်နေတာ ဒီမှာတင်ရပ်လိုက်ပါ။ ၁။ ရင်ဘတ်ကိုဖွင့်ထား ပြောချင်တာက လက်ပိုက်ပြီး မနေတတ်တဲ့ ဘဲတွေက ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိ သလိုလို တက်ကြွမှုရှိသလိုလို လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကွယ်နေစေမဲ့အနေအထား ပိတ်နေစေမဲ့အနေအထားတွေကို ရှောင်ကြဉ်ရမယ်။ (ဗိုက်ပူနေရင်ဗိုက်ကို ကျုံ့ နိုင်သလောက် ကျုံ့ထားရမယ် ဗိုက်ကိုကျုံ့လိုက်တဲ့အတွက် ရင်ဘတ်က ပိုပြီး ကြီးထားသရောင်ဖြစ်လာမယ်။ ဟဟ နောက်တာပါ) ဆက်ပြောမယ် ဒါကြောင့် ထိုင်နေ တဲ့အခါ
” ဖဲလိမ်ရိုက်နည်းများ “(ဗဟုသုတအနေဖြင့်သာ သိထားရန်)
[Zawgyi]” ဖဲလိမ်ရိုက်နည်းများ “(ဗဟုသုတအနေဖြင့်သာ သိထားရန်) ဖဲရိုက်တာ ၀ါသနာပါတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ကယ့်ဆရာကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီး မခံရအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ သူများတွေကို ဒုက္ခပေးတာမျိုးတော့ မလုပ်စေချင်ဘူး။ *အရင်ဦးဆုံး 21 လိမ်နည်းလေးပြောပြပါမယ်* ဒီနည်းလမ်းက သိပ်တော့အသုံးမ၀င်လှပါဘူး။ ဖဲထုပ်ကိုပြင်ရလို့ပဲ။ နောက်နည်းတွေကတော့ ပြင်စရာမလိုဘူး။ ဒီနည်းလမ်းကို သိတဲ့လူဟာ အနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်။ အသိအချင်းချင်း အပျော်သဘောမျိုး ဆော့ရင်းကနေ ပထမပိုင်း ဒိုင်က အရှုံးပေးထားပြီး နောက်မှပြန်ယူတာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ထိုးသားတွေကလည်း ပထမနိုင် ထားတဲ့ ဟာတွေ ပြန်ပါကုန်တော့ အတင်းပြန်လိုက်ရာကနေ ပါသမျှ အကုန်ကုန်တဲ့အဖြစ် ရောက်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေဆိုရင် အိမ်ပြန်ပြီး ပိုက်ဆံထုပ် သွားသယ်တဲ့အထိ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ ဒီနည်းမှာ ဒိုင်ကဘယ်လိုလိမ်လဲဆိုတော့ ဖဲထုပ်ဟာ သူပြင်ထားပြီးသား ဖဲထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် ဘယ်လိုရှာရှာ မတွေ့ရမယ့် နေရာကို ပြင်ထားတာပါ။
လာဘ် ပွင့် ချ င် ပါ သ လား ? သင့် ပိုက်ဆံ အိတ် ထဲ က လာဘ် ပိတ်ေ စ တဲ့ ဤအ ရာေ တွအမြန် ဖယ် ရှားလိုက် ပါ…
[Zawgyi]လာဘ် ပွင့် ချ င် ပါ သ လား ? သင့် ပိုက်ဆံ အိတ် ထဲ က လာဘ် ပိတ်ေ စ တဲ့ ဤအ ရာေ တွအမြန် ဖယ် ရှားလိုက် ပါ… မိမိအသုံးပြု​နေတဲ့ ပိုက်​ဆံအိတ်​ထဲမှာ မလိုအပ်​တဲ့အရာ​တွေထည့့်​ထားမိတဲ့ အခါမ​ကောင်းတဲစွမ်းအင်​​တွေဖြစ်​​ပေါ်တတ်​ပါတယ်​။ ငွေကုန်ကြေးကျ၊ ငွေယိုပေါက်တွေများလိမ့်​မယ်​။ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေကြုံရသလိုလာဘ် လာဘ ပိတ် တာတွေ။ ငွေကြေး အလိမ်ခံရ တာတွေ ဖြစ်တတ် ပါတယ် ။ ထို့အတူ ​ကောင်း​သောစွမ်းအင်​​တွေဖြစ်​​စေတတ်​သည့်​အရာ​တွေကို.. သင့်​ပိုက်​ဆံအိတ်​ထဲမှာထည့်​ထားခဲ့မည်​ဆိုလျှင်​.. ငွေကြေး- အဆက်မပြတ်ဝင်သလိုကျန်းမာ ချမ်းသာ ကာ .. ငွေကုန် ရတဲ့ ငွေထွက်ပေါက်တွေပိတ်ပစ်လိုက် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ …… သင့်​ပိုက်​ဆံအိတ်​မှာ
[Zawgyi] လာဘ် ပွင့် ချ င် ပါ သ လား ? သင့် ပိုက်ဆံ အိတ် ထဲ က လာဘ် ပိတ်ေ စ တဲ့ ဤအ ရာေ တွအမြန် ဖယ် ရှားလိုက် ပါ… မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေထည့်ထားမိတဲ့ အခါမကောင်းတဲစွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ၊ ငွေယိုပေါက်တွေများလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေကြုံရသလိုလာဘ် လာဘ ပိတ် တာတွေ။ ငွေကြေး အလိမ်ခံရ တာတွေ ဖြစ်တတ် ပါတယ် ။ ထို့အတူ ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကို.. သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင်.. ငွေကြေး- အဆက်မပြတ်ဝင်သလိုကျန်းမာ ချမ်းသာ ကာ .. ငွေကုန် ရတဲ့ ငွေထွက်ပေါက်တွေပိတ်ပစ်လိုက် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ……
[Zawgyi] ရွာဘုရားပွဲအကြောင်းပြပြီး လောင်းကစားဝိုင်းတွေ လုပ်နေတာကို အရေးယူပေးပါ သထုံမြို့နယ် ကတိုက်ကြီးကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းရေစက်ချပွဲမှာ ရွာဘုရားပွဲအကြောင်းပြပြီးလောင်းကစားဝိုင်းတွေလုပ်နေတာ ယခုတောင်ပေါ်ကျောင်းရေစက်ချပွဲပါနဲ့ဆို ၃ ကြိမ်ရှိပါပြီ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းရေစက်ချပြီးတာ ၁၀ ရက်လောက်ရှိနေပြီးမှ ဒီလောင်းကစားဝိုင်းကိုရွာမှာလုပ်တာ ကိုကျေးရွာအုပ်/မှုးကဘာကြောင့်မတားတာလဲ . . ဘုရားပွဲလုပ်တုန်းကလောင်းကစားဝိုင်းတွေလုပ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးပါသတိပေးဘူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ယခုလည်းဆက်လုပ်နေတာဘာကြောင့်လဲ ဒါဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုဗြောင်ကျကျစိန်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်လို့ထိရောက်စွာအရေးယူသင့်ပါတယ်။ Mar Mar Khine FACEBOOK VISIT WEBSITE [Unicode] ရှာဘုရားပှဲအကွောငျးပွပွီး လောငျးကစားဝိုငျးတှေ လုပျနတောကို အရေးယူပေးပါ သထုံမွို့နယျ ကတိုကျကွီးကြေးရှာ ဘုနျးကွီးကြောငျးရစေကျခပြှဲမှာ ရှာဘုရားပှဲအကွောငျးပွပွီးလောငျးကစားဝိုငျးတှလေုပျနတော ယခုတောငျပျေါကြောငျးရစေကျခပြှဲပါနဲ့ဆို ၃ ကွိမျရှိပါပွီ။ ဘုနျးကွီးကြောငျးရစေကျခပြွီးတာ ၁၀ ရကျလောကျရှိနပွေီးမှ ဒီလောငျးကစားဝိုငျးကိုရှာမှာလုပျတာ ကိုကြေးရှာအုပျ/မှုးကဘာကွောငျ့မတားတာလဲ . . ဘုရားပှဲလုပျတုနျးကလောငျးကစားဝိုငျးတှလေုပျလို့အုပျခြုပျရေးမှုးကိုလှတျတျောကိုယျစားလှယျကောမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှုးပါသတိပေးဘူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ယခုလညျးဆကျလုပျနတောဘာကွောငျ့လဲ ဒါဥပဒစေိုးမိုးမှုကိုဗွောငျကကြစြိနျချေါလိုကျတာဖွဈလို့ထိရောကျစှာအရေးယူသငျ့ပါတယျ။ Mar Mar Khine FACEBOOK VISIT
[Zawgyi]၂၉ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ မျက်ကြည်လွှာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လှူဒါန်းသွားမယ့် ဟိန်းဝေယံ မင်းသားချော ဟိန်းဝေယံတစ်ယောက်ကတော့ လာမည့် မေလ ၁၂ ရက်နေ့ မွေးနေ့မှာ မျက်ကြည်လွှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှူဒါန်းသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပရိတ်သတ် အားပေးမှုနေရာတစ်ခုရရှိထားသလို ဝေဖန်မှုတွေလည်း ခံခဲ့ရပေမဲ့လဲ သရုပ်ဆောင် ဟိန်းဝေယံ ဟာ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဖြတ်သန်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုကလဲ ဘာသာရေးလိုက်စားကြပြီး အိမ်မှာပဋ္ဌာန်းပွဲ အလှူပွဲကြီးတွေ လုပ်သလို သူ့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေနဲ့လည်း အပြင်မှာ ပရဟိတတွေ မကြာခဏ လုပ်ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဟိန်းဝေယံက ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့ ပြတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းဝေဖန်ထိုးနှုက်မှုတွေနဲ့အတူအမုန်းခံရမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ “မွေးနေ့မှာ ဝီလဖ်ဟိန်းဝေယံအဖွဲ့နဲ့အတူ အလှူအတန်းလေးတွေ လုပ်ပြီးတော့ ဖြတ်သန်းသွားမှာပါ။ အသက်က ၂ဝ ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မေ့လိုက်တယ်။ မရေတော့ဘူး။ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာနောက်တခုအနေနဲ့ကတော့ ဒီနှစ်ကို မျက်ကြည်လွှာရော၊ ခန္ဓာကိုယ်ရော လှူဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်
[Zawgyi] ပရုပ်လုံးနံ့လေး မွှေးနေတဲ့ အဝတ်အထည် တွေရဲ့ ကြောက်စရာ အန္တရာယ် အဝတ်အထည် လေးတွေ ပရုပ်လုးံနံ လေး သင်းနေအောင်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ ရနံ့လေး၊ ပိုးမွှား တွေတက်မှာလဲမပူရအောင်ဆိုပြီး ပရုပ်လုံးတွေကို ရှိသမျှ အဝတ်ဗီရို၊မွေ့ယာ၊စောင်တွေသိမ်းတဲ့နေရာ၊သားသား မီးမီး တို့ရဲ့ အဝတ် ခြင်းတောင်း တွေထဲမှာ ထည့်ကြတာ ဆန်းတာလုပ်လို့ ပြောစရာရှိတယ်။ ဘာများ မှားပြန်ပြီလဲပေါ့။ အင်္ဂလိပ် လို Moth Balls လို့ခေါ်ပြီး မြန်မာပြည် မှာ ပရုပ်လုးံ လို့သိကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ပိုးမွှား ပြေးအောင် သုးံတာပေါ့လေ။ ပါဝင်တဲ့ ဓာတုပေဒ ဓာတ်က Naphthalene နဲ့ Paradichlorobenzene. (နပ်ဖ်သလင်း နဲ့ပါရာဒိုင်ကလိုရိုဘန်ဇင်း)ဖြစ်ပါတယ်။ ပရုပ်လုးံ ရဲ့ အာနိသင်ကိုက တဖြေးဖြေးလုးံပါးပါးပြီး အငွေ့
ရဲအရာရှိ ၅၀ နီးပါး ရာထူးတိုး အပြောင်း အရွှေ့လုပ်
[Zawgyi] ရဲအရာရှိ ၅၀ နီးပါး ရာထူးတိုး အပြောင်း အရွှေ့လုပ် ထိပ်တန်းရဲ အရာရှိတွေ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတချို့က ဒုတိယ ရဲမှူးကြီးနဲ့ ရဲမှူးအဆင့် အရာရှိ ၅၀ နီးပါးလောက် ကို နေပြည်တော် ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် က ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့က ရာထူးတိုးတာ နေရာပြောင်းလဲတာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ရာထူးတိုးလိုက်တဲ့ အထဲမှာ ရဲမှူးကြီး ကနေ ရဲမှူးချုပ် အဆင့် တိုးပေးလိုက်တဲ့ အဆင့် မြင့် ရဲ အရာရှိ ၅ ဦး နဲ့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအသီးသီးက ဒုတိယ ရဲမှူးကြီး နဲ့ ရဲမှူး အဆင့် ရဲအရာရှိ ၄၂ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။